Vaovao - Ahoana ny fomba hanamboarana varingarina Hydraulika
Ny varingarina hydraulic, raha ny tena izy, dia ampahany tsy miova amin'ny fitaovana mekanika. Tokony mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanosehana, fikorotanana, toerana fametrahana ary ny haben'ny fametrahana ny fitaovana rehetra. Rafitra voafaritra manokana an'ny milina fananganana, ny fetra varingarina dia henjana tokoa.
Aorian'ny famaritana ny tosika (hery misarika), ny kapoka, ny hafainganam-pandehan'ny hetsika ary ny fomba fametrahana ny varingarin-tsolika, ny tsindry omena ary ny tahan'ny fantsom-pamokarana solika, ny tsindry sy ny fanosehana ny varingarina menaka dia voafaritra ary ny savaivony anatiny an'ny voatondro ny varingarina menaka. Ny hafainganam-pandeha sy ny savaivony anatiny amin'ny varingarina menaka dia mamaritra ny tahan'ny fikorianan'ny solika.
Raha fantatrao ny savaivony anatiny, ny tsindry miasa, ny kapoka ary ny fomba fampifandraisana ny varingarina menaka, dia azonao atao ny mifidy ilay karazany. Misy fenitra nasionaly ho an'ny varingarina solika, ary ilay maodely fampiasa matetika dia antsoina hoe varingarina mahazatra.
Ohatra, Araka ny fanosehana 4 taonina dia azo isaina fa raha ny tsindry Bai an'ny varingarina menaka dia natao ho 8Mpa, ny savaivony anatiny an'ny varingarina menaka dia 80, ary ny maodelin'ny varingarina menaka dia 80 * 40 * 300-8mpa. Ny varingarina karazana tsorakazo dia azo ampiasaina amin'ny vidiny ambany sy ny fikojakojana mety. Raha toa ka 16MPa ny tsindry miasa amin'ny varingarina solika, ny savaivony anatiny an'ny varingarina menaka dia 60, ary ny maodelin'ny varingarina menaka dia 60 * 35 * 300-16mpa , ary ny karazan-tariby na ny karazan-tsoroka dia azo ampiasaina. Ampirisihina ianao hanambatra ny tsindry rafitra amin'ny fitaovana mekanika mba hamaritana ny tsindry miasa amin'ny varingarina menaka aloha. Raha vita ny fitaovana mekanika dia tokony ho ambany ny tsindry rafitra, matetika latsaky ny 5MPa. Raha milina matevina ny fitaovana mekanika dia tokony ho avo kokoa ny tsindry rafitra
Na izany aza, marimaritra iraisana sy misavoritaka ny fenitry ny varingarina solika, ao anatin'izany ny fenitra nasionaly, ny fenitry ny minisiteran'ny milina, ary ny fenitra indostrialy isan-karazany. Ny barika varingarina, famehezana, fifandraisana ary fomba fanandramana ny varingarina menaka dia samy manana ny feniny manokana. Ny fomba tsara indrindra dia ny fampitana sary mankany amin'ny orinasa.